Linux waxay leedahay qalab cusub oo loogu talagalay CAD - Geofumed
Linux ayaa qalab hooyo cusub CAD
Abriil, 2012 AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, IntelliCAD
Si ka duwan degaanka Geospatial halkaas oo codsiyada Furan ee ka baxsan kuwa macaamiisha ah, software yar oo bilaash ah waxaanu u aragney CAD aan ka ahayn waxqabadka FreeCAD oo weli leh wax badan oo lagu daboolayo. Iyadoo days Waa qalab aad u firfircoon, ujeedkeeduna waa inay noqoto mid ficil ah oo aan CAD ahayn oo lagu dabaqo injineernimada, dhismaha iyo dhismaha. Sida loola tacaalayo dhibaatooyinka multiplatform waxay ahaayeen kuwo u jahwareersan kuwa doonaya in ay la shaqeeyaan Mac ama Linux, iyo halka AutoDesk ay bilaabanayso bilawga noocyada Mac ee 2010, Linux waxay u muuqataa inaysan lahayn aalad sida AutoCAD ama Microstation. Just Ates y Medusa kuwaas oo ah qalab aad u baaluq badan iyo kuwa yar oo taageero ka helaya PC, Mac iyo Linux.
Hadda Bricscad ayaa lagu dhawaaqay, mid ka mid ah xalalka inkasta oo laga bilaabo IntelliCAD, dhawr sano ka hor waxay horay u ahayd mid madax banaan oo qaabkan ah, waxaana laga yaabaa inay sabab u tahay wakiilada heer caalami ah, oo leh kobcin ballaaran (100,000 licenses). Waxaa jira horumarin badan oo ku saabsan CivilCAD oo ku yaalla degaanka shaxanka, iyo sidoo kale injineernimada iyo qaabaynta. Solutions sida CivilCAD Burburinta Bricscad oo xallinaysa dhibka baahida loo qabo AutoCAD buuxda si ay u ordo; yaa og in haddii mudada dheer ee aan ku yeelan karnnsanayno CivilCAD ee Linux.
Kuwa ugu soo jiidashada badan ee Bricscad V12 waa in ay si toos ah uga shaqeyso DWG iyada oo aan loo baahnayn dhoofinta ama soo dejinta, waxay xitaa aqoonsataa qaababka AutoCAD ee 2.5 ilaa 2010 (Ma ku jiraan qaabka cusub ee AutoCAD 2013 taas oo aan si dhib leh u imaan). Horeba ereyadan oo kale sida caqabadaha xudunta ah ayaa lagu daray.
Xaqiiqda ah in qalabkani uu ka soo baxay IntelliCAD, inkasta oo aanu sidan jirin, waxay ka soo kabatay qeyb ka mid ah dhaxalka iyada oo loo aqoonsanayo qaabka DWG oo ay sii wadaan caqligalka hawlgalka inta badan hawlgalladeeda. Taasi waa sababta LISP, BRX, ARX iyo kiiska Windows VBA.
Tani waxay ka caawineysaa inay fududayso in la helo dadka isticmaala qalabka iyo yaraynta curvida waxbarashada; waxaa la sheegayaa in isticmaalaha AutoCAD todobaadkiiba uu horayba ugu jirey jawi cusub oo aan u baahneyn koorso degdeg ah. Marka laga soo tago Bricscad waxay ku cusbooneysiisay isticmaalka qalabka sida afar geesoodka, taas oo hoos u dhigta tirooyinka xayeysiiska ee marxaladaha dib-u-celinta ama soo jeediyay shaqadaa gaar ahaan habka 3D.
Cosillas oo leh, oo soo jiidata dareenka:
Hawlgalku wuxuu ku yaalaa duulimaadka, macneheedu waa inaad ka shaqeysiisaa naqshadeynta iyo sawirada sheyga waa xaalada. Xaaladaha xalalka kale, tani waxay suurtagal tahay oo kaliya aragti xiga iyo sawir ahaan.
Waxaad ku dhejin kartaa lakabyo faylasha dibadda ah.
Waxaad sameyn kartaa jaranjaro.
Qeyb ka mid ah xayiraadyada 3D oo ay ku jiraan qaabaynta, iyo ikhtiyaar u ah inay dib u isticmaalaan sawirka (ma aha oo kaliya qaabeynta)
Waxaad bedeli kartaa qaabeynta waraaqaha daabacan (layouts) isla mar ahaantaana, oo ay ku jiraan nuqul ka mid ah alaabooyinka midba midka kale.
Cabbiradu waxay ku xiran yihiin qodobbada tixraaca, markaa marka aad sheyga ka guurto, cabbirku si toos ah ayuu isbeddelaa adigoon wax ka beddelin node. Tan xataa xitaa booska warqadda.
Waa wax la yaab leh sida ay u shaqeyso, iyada oo shuruudaha ugu hooseeya. Wixii Windows waxay ku socotaa 256 MB RAM waxayna ku talineysaa 1 GB; lid ku ah AutoCAD 2012 iyo 2013 oo ku talinaysa 4 GB.
Marka laga hadlayo Linux, waxay ku socotaa qaybinta (ama ka sareeya): Fedora 14, OpenSuse 11.3, Ubuntu 10.04
Sida qiimaha: Shan ka mid ah kharashka AutoCAD.
Ugu dambeyntii waxaan tixgelineynaa war xiiso leh, Bricscad V12 ee Linux.
Halkan waxaad ka heli kartaa u soo qaado sawir
Halkan waxaad ka ogaan kartaa In badan oo ka yimaada Bricscad
Halkan waxaad ka arki kartaa codsiyada lagu horumariyey Bricscad
Post Previous«Previous Soo koobid: Maxaa Cusub ee AutoCAD 2013 ku saabsan noocyada kale ee cusub
Post Next Course edition labaad ee GIS iyo geodatabasesNext »
Mid ka mid ah Jawaab in "Linux leedahay qalab cusub oo loogu talagalay CAD"
Wilfredo Farias isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa talo bixin si aan u ogaado codsiyada google iyo autoCAD. Anigu waxaan ahay injineer madani ah